Accueil > Gazetin'ny nosy > Teti-bolam-panjakana 2022 : famokarana harena no fototra
Teti-bolam-panjakana 2022 : famokarana harena no fototra
Manomboka mampiaka-peo indray ireo mpilalao ny ain’ny vahoaka Malagasy amin’ny raharaham-barotra ka any amin’ny rafi-panjakana mpandrafitra sy mpanapa-kevitra momba ny ho lalàna mamaritra ny teti-bolam-panjakana amin’ny taona 2022 no iantefan’ny tsindrin’izy ireo. Tsy mahagaga raha manao amboa ditsoka ireny mpilalao aim-bahoaka ireny satria very fihinanana eo anoloan’ny ezaky ny fitondram-panjakana hanarina ny firenena amin’ny alalan’ny famokarana harena ry zareo. Ny raharaham-barotra izay mifototra amin’ny fanafarana entana (importation) mantsy no ahazoan’ireny mpilalao ny aim-bahoaka Malagasy ireny tombontsoa ka na ho potika rahampitso dia rahampitso ihany aza ny seha-pihariana isan-tokony eto, tsy mampaninona an-dry zareo.
Vantanina ny resaka fa saika karana no mamaritra ireny mpanafatra entana hatobaka eo amin’ny varotra eto an-toerana ireny. Iray amin’ny entana nahazoan-dry zareo tombony hatry ny ela ny fanafarana savony amin’ny alalan’ilay antsoina hoe “Bondillons”, ka ilay tontolon’ny famokarana savony eto no tetehin-dry zareo hopotehina.
Mety ho marina, araka ny voalazan’ireo vahiny mpilalao ny aim-bahoaka ireo fa “ny 70%-n’ny savony mitobaka amin’ny tsena eto dia avy amin’ny savony nafarana “bondillons” avokoa”, fa ny inian-dry zareo ikimpiana sy amendrofendroana ny vahoaka sy ny mpitondra dia ny hoe “raha vokarina eto an-toerana amin’ny alalan’ny orin’asa mpanao savony eto ve ireo savony ilaina eto ireo dia kely kokoa noho ny manafatra “bondillons” ny tombontsoa ho azon’ny firenena raha miohatra amin’ny tombombarotra miditra amin’ireo vahiny mpanafatra savony ireo?
Any amin’ny fampidinana ny haban-tseranana (taxe dounière) ho 10% amin’ny fanafarana an’io savony “bondillons” io mantsy no tsindry ataon’ireo karana amin’ny mpitondra izao satria hoe hamono an-dry zareo ny fitazonana ny haban-tseranana 20% amin’io entana io. Fendrofendroin-dry zareo amin’ny resaka fanarenam-pirenena taorian’ny covid 19 ny resaka nefa raha tena fanarenam-pirenena no tanjona, azo antoka kokoa ny famokarana harena eto noho ny fanafarana entana. Famotehana firenena ny fanafarana entana.